Tag: ka jooji bogga | Martech Zone
Tag: ka jooji bogga
Waxaan la wadaagnay qaar ka mid ah tirakoobyada ku saabsan sababaha ay dadka uga bixi kareen iimaylkaaga suuqgeynta ama joornaalada. Qaar ka mid ah xitaa ma noqon karto qaladkaaga, maadaama macaamiisha ay ku qulqulayaan emayl aad u tiro badan oo kaliya ay u baahan yihiin xoogaa gargaar ah. Markay macmiilku helayo oo uu ku gujinayo xiriirkaas ka saar cinwaankaaga emailka, maxaad samaynaysaa si aad isugu daydo inaad u badbaadiso? Dhawaan waxaan ku sameeyay taas macaanteed, oo ah goob qalabka maqalka ah oo cajiib ku ahayd
Boggaaga Ka-saar-la'aanta Miyey U egtahay sidan?
Talaado, Maarso 11, 2008 Talaado, September 29, 2020 Douglas Karr
Waxaa laygu qoro olole talaabo cadaalad ah oo adag oo ka socda shirkad dalab soo jiidasho leh leh. E-mayllada waxay ahaayeen qoraal cad laakiin waxay lahaayeen nuqul aad u dheer. Mar kasta oo aan ficil ku qaado degelkooda, waxaan ka heli jiray waxyaabo kala duwan oo ku saleysan waxqabadkeyga (ama dhaqdhaqaaq la'aan). Maanta waxaan helay emayl si fiican u qoran laakiin waxaan go aansaday inaan iska daayo dalabka isla markaana aan ka noqdo email-ka. Waa tan sida ay u macsalaameeyeen: hoog! Tani waa fariinta ka dambeysa tan,